Wadamada Baxreyn iyo Suudaan oo iyaguna xiirka u jaray Iraan | waamonews
Monday, January 4th, 2016 | Posted by editor
Wadamada Baxrayn iyo Suudaan oo xiriirka diblumaasiyeed u jaray dalka Iraan, waxayna Garab istaageen dalka Sacuudi Carabiya.Waxaa muuqataa in la kala miirmi doono oo bur iyo biyo loo kala bixi doono, Shiica iyo Sunni.
Dowlada Shiicada ah ee Iraan ayaa sanooyinkan dambe awood is bideeysay kadib markii Shiicada iyo urarada argagaxisada ay gacanta ku dhigeen wadamadii Islaamka ee Suniyiinta, sida Ciraaq, Suuriya iyo Yemen.
Laakiin waxaa hubaal ah hadii wadadamada Islaamka ay isku mowqif ka qaataan Iraan ay ka guuleysan doonaan duulaanka Shiicada iyo guud ahaan Cadowga Suniyiinta ay maagan yahiin.
Isku soo duuboo Sacuudi Carabiya iyaga ayaa jabiyay Wadamada Suniyiinta, dhaqaalaha lagu burburiyay walaalahooduna iyaga laga qaadi jiray, Laakiin haatan war ma jiro, Suniyiinta intii hadhay ayaa la doonayaa in la cirib tiro.
Koley aduunka sida uu ku socdo haatan waa iska Aakhiro saman. Dagaalada shaam ka socdana halagu quus qaato inay yahiin Calaamadaha Qiyaamaha, Koley allah ayaa garanayaa goorta ay Qiyaamada dhaceyso.
1 Response for “Wadamada Baxreyn iyo Suudaan oo iyaguna xiirka u jaray Iraan”
Adeer Sucuudiga siyaasadooda kama helo laakin maanta waxay taagan tahay in diinta saxda la difaaco weeye.
caalamul Islaami waa inay xidhiidhka u jaraan shiicada Iiraan.
Kooxda damun jadiid waa khubatha diinta ka dhab ahayn…
Maanta waxay ahayd inay xidhiidhka u jaraan shiicada Iiraan
laakiin caku kooxda Islaax weligood kama run sheegin siyaasad islaami oo sax ah
viva Sunni world
Down the grandsons/serpents of Abdullaahi bin Ubaya ibnu salool, the Jew Shia founder